Posted by KZကေ at 15:362comments:
ကိုလူ။ ။ တခုဖြတ်မေးမယ်နော်။ ဒီအလုံးစုံအမှန်တရားဆိုတာတကယ်မရှိနိုင်ဘူးလား။ ဥပမာ တံခါးအားလုံးကို
ကိုမူ။ ။ အလုံးစုံအမှန်တရားဆိုတာက totality/ universality ကိုကျနော်ဆိုလိုတာ။ ခင်ဗျားပြောတဲ့ master key ပေါ့လေ။
ဒါကြောင့်ပို့စ်မော်ဒန်သမားတွေက ဒီသဘောတရားသက်ဝင်တဲ့ ရှင်းလင်းချက်နဲ့အရေးအသား တွေကို
master narrative လို့ခေါ်ကြတယ်။
ကိုလူ။ ။ ဒါဆိုအချို့အစဉ်အလာဘာသာရေးထုံးတမ်းစဉ်လာသွန်သင်မှုတွေဟာ master narrative
ကိုမူ။ ။ ဟုတ်တယ်ပြောရမှာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်ကပုံပြင်တွေအများကြီးနားထောင်ခဲ့ရတယ်။
ရှေးအစဉ်အလာမှမဟုတ်ပါဘူး။ သမိုင်းဟာလမ်းဆုံးသွားပြီ။ ဈေးကွက်စီးပွားရေးနဲ့ လစ်ဘရယ်ဒီမိုကရေစီ
ဟာနိုင်ငံအားလုံးအတွက် အဖြေပဲတို့။ အားလုံးဟာအမေရိကန်ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ လူနေမှုစတိုင်
နောက်ကိုလိုက်ကြရတော့မယ်/ လိုက်နေကြတယ်ဆိုတာမျိုး တို့ကိုလည်း master narrative ထဲ ထဲ့နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ကိုလူ။ ။ ခင်ဗျား master narrative ဆိုတာကြီးစကားလှယ်ပေးပါဦးဗျာ။ ကျုပ်သူများပြန်ဆရာလုပ်ချင်ရင်ခက်မယ်။
ကိုမူ။ ။ meta narrative သို့ grand narrative လို့လည်းခေါ်ကြတယ်။
ဇတ်လမ်းငယ်လေးတွေရဲ့သီးခြားအနေအထားမပေါ်လွင်တော့ပဲ ခြုံငုံ ကောက်ယူပြီး ရှင်းတဲ့ဇတ်လမ်း။
စုတ်ချက်တခုချင်းစီအသေးစိတ်ထက် တခုလုံးကြီးသဘောကိုယူတာ။ Big picture လို့လဲရေးတာတွေတွေ့ဘူးတယ်။
ကျနော်တို့ဆီကပညာရှင်တွေသဘောမညီခင် ခုနေတော့ master narrative ပဲလုပ်ပါဗျာ။ စကားမစပ်ပြောရရင်ဒီနေ့ခေတ်နိုင်ငံတွေမှာတိုင်းရင်းသားမျိုးနွယ်စုတခုချင်းရဲ့အရေးကိုမှိန်ပြီးယေဘူယျလူမျိုးဘောင်တခုထဲကနေကိုင်တွယ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာတွေ မပြေလည်တာတွေတွေ့ရတယ်။ ဒါကို ပို့စ်မော်ဒန်နိုင်ငံရေး ရဲ့အကျပ်အတည်းတခုလို့ပြောနိုင်တာပေါ့။
ကိုလူ။ ။ ကိုယ့်လူ ခင်ဗျားနိုင်ငံရေးနောက်မှလုပ်။ ခုပြောတဲ့ထိနားလည်သလောက်ကောက်ချက်ချရရင် ပို့စ်မော်ဒန်သမားတွေက အလုံစုံအမှန်တရားကိုငြင်းတယ် ဆိုတော့ မော်ဒန်ခေတ်ရဲ့အထင်ကရ မာ့စ်ဝါဒကိုဆန့်ကျင်လိုက်တာပေါ့။
ကိုမူ။ ။ Marx ၀ါဒီတွေထဲမလည်း ပို့စ်မော်ဒန်သမားတွေရှိပါတယ်။ ထင်ရှားတာက FREDRIC JAMESON
ကိုလူ။ ။ လုပ်စမ်းပါဦး Marx ၀ါဒီက ပို့စ်မော်ဒန်နဲ့တလမ်းသွားအမှန်တရားကို ဘယ်သို့ဝေဖန်ပြီးဘယ်ပုံလက်ခံလိုက်တာပါလိမ့်။
ကိုမူ။ ။ ကားလက်မှတ်ကြီးရဲ့တပည့်သားမြေးတွေက ခေါင်းမာတာခင်ဗျားလည်းသိသားသနဲ့။ ဂျိမ်းဆင်ကြီးကအလုံးစုံအမှန်တရားကို ပို့စ်မော်ဒန်ဘောင်ထဲကနေသူလက်ခံလိုက်ပုံကတမျိုး။ ယဉ်လှတယ်။
ကိုလူ။ ။ ဒီလိုဆိုလည်းနောက်တခေါက်ယဉ်ယဉ်လှလေးအကြောင်းလုပ်ပါဗျာ။
Posted by KZကေ at 23:176comments:
ကိုလူ။ ။ ခင်ဗျားလာတာအတော်ပဲ။ ကျနော်တခုမေးချင်နေတာ။ ပို့စ်မော်ဒန်ဆိုတာဘာလဲဗျ
ကိုမူ။ ။ မထိတ်သာမလန့်သာဗျာ။ ခင်ဗျားကကျုပ်ကိုဘာထင်လို့ဒီလိုအထူးအဆန်းမေးခွန်းတွေမေးရတာပါလိမ့်
ကိုလူ။ ။ ခင်ဗျားကဒါမျိုးတွေနှံ့စပ်လို့ပါကိုယ့်ဆရာရယ်
ကိုမူ။ ။ အင်း ကျနော်ဖတ်ဖူးတဲ့ကာတွန်းတခုသွားသတိရတယ်။ ကားမှတ်တိုင်မှာဗျာ လူတွေအများကြီးစောင့်နေတုန်း
တယောက်က ဆရာ လို့ခေါ်လိုက်တာ အားလုံးလှည့်ကြည့်ကြတာကလား
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေ ဆရာဆိုတော့လည်းသိသမျှလေး ၀ါးကြည့်ရတော့မှာပေါ့
ကိုလူ။ ။ ဆရာကတော့တကယ့်ဆရာပါဆရာရယ်
ကိုမူ။ ။ ဒီလိုလုပ်မယ်လေ။ ပို့စ်မော်ဒန်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပဲခဏနားလည်အောင်ကြိုးစားရအောင်။
ကိုလူ။ ။ ဟာ ဟေ့လူ ခင်ဗျားကဖြေမှာလား မေးမှာလား
ကိုမူ။ ။ ဒီလောက်တော့ ခင်ဗျားရပါတယ်လေ လုပ်ကြည့်စမ်းပါ
ကိုလူ။ ။ ပို့စ်မော်ဒန်ဆိုတော့ မော်ဒန်လွန်ပေါ့ မဟုတ်ဘူးလား
ကိုမူ။ ။ မငြင်းသာပါဘူးလေ ဆိုတော့တဆင့်တက်ကြည့်ရအောင် ခင်ဗျားအဖြေအရ ပို့စ်မော်ဒန်ကိုနားလည်ဖို့
၂ခုတော့သိဖို့လိုလာတယ် မော်ဒန်ဆိုတာဘာလဲနဲ့ ဘာလို့မော်ဒန်ကိုလွန်လာရတာလဲ
ကိုလူ။ ။ ဆက်စမ်းပါဦးဗျာ
ကိုမူ။ ။ မော်ဒန်ဆိုတာလည်းပြောရရင်ရှည်မှာပဲ
ကိုလူ။ ။ ဒီအကြောင်းနောက်မှရှင်း ခုပို့စ်မော်ဒန်ဆိုတာကိုပဲဦးတည်ပြီးပြောဗျာ
ကိုမူ။ ။ မော်ဒန်ကိုလွန်လာရတဲ့အကြောင်းတွေကတော့များပုံရတယ် ကျနော်စကားခံထားတယ်နော်
ကိုလူ။ ။ ခင်ဗျားသဘော ကျုပ်နားလည်အောင်ပြောဖို့တော့လိုမယ် ဒါလိုရင်းပဲ
ကိုမူ။ ။ အဲသည်မှာခက်တာပဲ ကျနော်လည်းနားမလည်လို့လျှောက်ဖတ်ရင်း ဖတ်သမျှလေးပြောပြမှာပါ
ပို့စ်မော်ဒန်ဆိုတာ အဓိပါယ်တွေဆုံးရှူံးသွားတာလို့ တချို့ဖွင့်ဆိုချက်တွေမှာဆိုသဗျ
ကိုလူ။ ။ ကျုပ်ကတော့ နားလည်မှဖြစ်မယ် ခင်ဗျားကိုလည်းဆရာခေါ်ပြီးပြီ ရအောင်သာရှင်းပေတော့
ကိုမူ။ ။ သင့်မြတ်လှပါပေတယ် ကောင်းပြီလေ မရဲသော်လည်းဒီကျွဲပြဲ ကျနော်စမ်းစီးကြည့်တာပ
Posted by KZကေ at 13:494comments:
ကောင်း၏ ဆိုး၏ ဆိုတာတွေပြောရင်လည်း ၀ါးချတာပဲဖြစ်မှာ။
သာတယ်ပြောနိုင်ရုံဆိုတော့ ပြန်ဟန်ထက် မူရင်းဆရာရဲ့စာကိုယ်ပိုင်းကိုပြောရင်ကောင်းမလား
ပြသနာရဲ့အနံ့တော့ရနေပြီ တခြားသူတွေရှင်းပါလိမ့်မယ် ကျွမ်းကျင်သူတွေရှိသားပဲဆိုတဲ့
ပြသနာဟာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးအခေါ်ကြောင့် စံနစ်တခုလုံး။ အဖွဲ့အစည်းတခုလုံး
နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံး ဘုံးဘုံးကျသွားနိုင်တာမျုိုးဆိုရင် ခင်ဗျာနမူနာတွေလိုမယ်မထင်ပါ။
မီးဆိုတာပူမှန်းလူတိုင်းသိကြတာပေါ့ သို့သော် ကိုယ်ကိုင်မိတဲ့မီးကပိုပူတယ်လို့ ပြောတဲ့သူတွေကအများကြီး
ကျနော်တို့ဆီက ဆရာများကိုဂရင်းကဒ်ပေးစေချင်တယ် ဒီမှာက
နိုင်ငံရေးကျွမ်းကျင်သူတွေ လေ့လာသူတွေ ဘေးထိုင်ဘုပြောသူတွေ (ခင်ဗျားအပါအ၀င်) များတယ်မဟုတ်လား။
အဲသည်ကတဆင့် အမေရိကန်တွေရဲ့ဘက်နှစ်ဘက်စိတ်ဓါတ်။ ၀ိရောဓိနဲ့ လူသစ်တန်းစိတ်ဓါတ်တွေဆီ
ဖြစ်နိုင်ခြေအများဟာေ၀၀ါးမှုကိုဖြစ်စေပါတယ် ဘာမှမရွေးပဲ မျှောစေနိုင်တယ်။ ရှိရင်းဆွဲအနေအထား
လူသစ်တန်းသမားရဲ့ပေါ့ပါးလတ်ဆတ်မှုကနေ စတိဗ်ဂျော့ကို အောင်မြင်စေတာလို့
မူရင်းရေးသူကဆိုလာရင် ကျနော်က တ၀က်ပဲလက်ခံရပါလိမ့်မယ်
Apple ဆရာရဲ့မြင့်မားတဲ့ဥါဏ်အခံကို လွတ်လပ်စိတ်က ၀င်ပြီးဖွင့်ပေးခဲ့တာသာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်
ကျနော်လိုလူမျိုးဘယ်လောက်ပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်တွေးတွေး iPHONE လိုမျိုးရဖို့တော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ပါဘူး
ဒီလင့်က အက်ဆေးဘာသာပြန်ကိုဖတ်ပြီးရေးတာပါ။ ဘာသာပြန်ထက်နားလည်ရပိုခက်သွားရင်ကျနော့်အားထုတ်မှုကိုသာအပြစ်တင်ကြပါခင်ဗျား။
Posted by KZကေ at 22:582comments:
ခင်ဗျားပို့တဲ့မေးရတယ် U tube လည်းကြည့်ရပါ့
ဟေ့လူ နိုင်ငံရေးဘောဂဗေဒတို့ ပုိ့စ်မော်ဒန်တို့ ဥါဏ်အလင်းပွင့်ခေတ်တို့
ဆိုတာတွေက ကန်တော့ပါရဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အထင်ကြီးပြီး
Posted by KZကေ at 13:482comments:
ကျနော့်အတွက်တော့ အနဲလေး ကျနော်တယောက်တည်းအတွက်တော့
ဒါနဲ့ မနေ့က ဘရင်းကြက်ပေါင်းရေသောက်ကြည့်တယ်
ပြောရရင် ပက်ပက်စက်စက်ပြောရရင် မကောင်းဘူး
စကားမစပ် ခင်ဗျားကရပ်မင်ကြီးလည်း အိမ်ဖြူကိုမျက်စောင်းထိုးခဲ့ဆိုပဲ
အနဲဆုံး ဖက်ငှက်ကထ (FED) လောက်တော့မှန်းကောင်းမှန်းခဲ့ပေမပေါ့
ကျနော်ဟာ အမြဲမကြေနပ်နေတဲ့သူပုန် တယောက်ပါဗျာ ဆိုတဲ့
ထပ်ပြီးစကားမစပ်ရရင် ပိုလန်းစကီးကို ဆွစ်ရောက်တုန်းဖမ်းလိုက်တယ်
ဘားလမ်းထိပ်မှာ နားကွင်းတဘက်နဲ့ နောက်နှစ်ရာသီအစမှာ
ရန်ကုန်ယူနိုက်တက်ကိုခေါ်မယ်ဆိုတဲ့ ခေတ်လူငယ်လေးလိုတော့ မမေးနဲ့ပေါ့လေ
အနုပညာဟာ အမြဲတန်းအာဏာရှင်ဆန်ခဲ့တာ ဆိုတဲ့သူ့အပြောတော့
တမျိုးကောင်းတာပေါ့ cnn တို့ bbc တို့လည်းဘာထူးလို့လည်း
ရေကြီးတယ် လေတိုက်တယ် လောက်ပါပဲ
အီရတ်မှာဗုံးကွဲတယ် အာဖဂန်မှာ လည်းဗုံးကွဲတယ်
အီရန် ညူကလီးယားက ဘာဘာညာညာ ဒါတွေပါပဲ
ကဒါဖီက ကိုလံဘီယာ (ဗင်နီဇွဲလားထင်တယ်) သွားတယ် အားအားယားယားဗျာ
လက်ဝဲသစ်လိုလို ဘာလိုလို ဆန်သစ်ဆန်ဟောင်းလောက်တော့
ဒါနဲ့ပဲ ကျနော်ရေးခဲ့တဲ့ ချက်ပွိုင့်ချာလီကိုသတိရပြန်ရော
Posted by KZကေ at 23:212comments:
ဂျာနယ်နဲ့ ကာဖယ်နဲ့ ခိုးဝယ်လို့ရတဲ့
Posted by KZကေ at 13:324comments:
၃ရက်လောက်ရှိပြီ သွားရော ရေးတုန်းကပေါ်တယ်
Sent at 10:43 PM on Friday
Comment ရေးတဲ့အချိန်တုန်းက နောင်ကြီးမူးနေတယ်ထင်ပါရဲ.
RaisingaChild Costs Some $221,000 Before Colege
ဆိုတဲ့ Nancy Gibbs ရဲ. Essay လေးကိုဖတ်နေတယ်
Essay လေးက ချစ်စရာလေးဗျ
Essay လေးတွေကို မြန်မာပြည်ထဲမှာထုတ်တဲ့
Sent at 10:53 PM on Friday
Prisoner of the State ကိုလည်းကျွန်တော်ဖတ်နေတယ်ဗျ
ရေးထားတဲ့ပုံစံက Essay တွေလောက်မခက်ဖူးရယ်
သူက ရသ ကိုဂွင်အတိုလေးနဲ့လုပ်ရတာ
Prisoner of the State က ရသ, မပါတော့နည်းနည်းပျင်းစရာကောင်းနေတယ်
Sent at 11:01 PM on Friday
အလိုအရဆိုရင်တော့ အဲဒီစာအုပ်ဟာ ဘာသာပြန်ရမည့်ထဲမှာပါတယ်
ကျွန်တော်တော့ ဘာသာပြန်ရတာကို တော်တော်လေးလက်တွေ.လာပြီ
Posted by KZကေ at 23:272comments:
အားပါတယ်။ ငါးကန်ရေလဲဖို့ပဲရှိတယ် ။ ကောင်းတယ် ညနေစာ အင်း။
ရေကူးကန်နားကဆိုင်။ အိုကေ။ ဘိုင့်ဘိုင်
Water please I said then. It wasabit windy day withabrief fall of rain. A hard striking sound mixed with shouting in local dialect sometimes drifted fromanearby work site. Well,asmall world is moving with the whole one, inaharmonious fashion? An answer afteraphilosophical phrase has to expect yet. Who knows!
လွတ်လပ်မှု လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ ခေတ်မှီမှုတွေ
Posted by KZကေ at 23:47 No comments:
သူ့ကိုမှီးပြီးပေးတဲ့ ဖြတ်စများ ၁ ၂ ၃ တွေကရှိနေပြန်ရော
Posted by KZကေ at 21:52 No comments:
လက်ကိုင်ဂွေက ငါ့ကိုလား ငါ့ကိုယ်စား
Posted by KZကေ at 00:11 No comments:
Posted by KZကေ at 22:22 No comments:
ဒါပေမဲ့မရေးဖြစ်ဘူး။ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ web လေး blog လေးတောင်နပ်မှန်အောင်
၃ညအိပ် ၄ရက် ခရီးမှာပြောချင်တာလေးတွေတွေ့လာခဲ့တယ်။
ကျနော်လည်းအမူးပြေတော့ ဟိုကောင်တာထောင့်က ၀ီစကီလေးဘယ်ဈေးပါလိမ့်
Posted by KZကေ at 00:09 No comments:
Posted by KZကေ at 00:572comments:
ဒီတော့ ကျနော်ပြောခဲ့သလို ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ တ၀က်သိစိတ်နဲ့ညိပြီးညမှာအိပ်မက်
အဲဒီအခံဟာ နောက်တပတ် နောက်တလ လောက်နေမှ အခြားတခုနဲ့ရောပြီး
ဥပမာ ခင်ဗျားခုစင်ကာပူမှာအလုပ်လုပ်နေပေမဲ့ အိပ်မက်က အရင်
ရန်ကုန်မှာ ကျောင်းတက်စဉ်က အကြောင်းတခုခုကို
မက်တယ်ဆိုကြပါစို့ လှည်းတန်းမှာ ကိုယ့်လူက IFL ကပြန်လာမဲ့ချစ်သူကိုစောင့်နေတဲ့အချိန်
မမျှော်လင့်ဘဲသူငယ်ချင်းတယောက်နဲ့တွေ့မယ် ဒါပေမဲ့သူက ခင်ဗျားကို စင်ကာပူမှာလုပ်ငန်းတွေ
မက်သူခင်ဗျားမှာ ကာလစဉ်ဆက် အချက်အလက်အားလုံးရှိနေတာကိုး
တော်တော်များများကြုံဘူးမှာပါ အိပ်မက်ထဲကနေရာဟာ ဟိုရောက်ဒီရောက်ပဲ
ပထမအိပ်မက်ကရန်ကုန်မှာ တခုခုလုပ်နေတုန်း ဖျတ်ကနဲ တခြားတနေရာရောက်ချင်ရောက်သွားတာ။
ဒီမောင် သူငယ်ချင်းတယောက်အခန်းကိုသွားလည်တာ တံခါးအဖွင့်
အိပ်မက်နဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော်တို့ဆီမှာလူကြိုက်အများဆုံးက အိပ်မက်ကိုအဓိပ္ပါယ်ကောက်ကျတာပါ
ဟဲ့ ညကပန်းသီး၂လုံးမက်တယ်။ ပန်းသီးဆိုတော့အာဒမ်နဲ့ဧ၀ ပဲ
အတွဲ ။ ပြီးတော့ ၂လုံး
ဒါဆိုရင် ၂၂ ။ အနဲဆုံး၂ တလုံးတော့သေချာနေပြီဆိုတာမျိုးပေါ့။
အိပ်မက်နဲ့ပတ်သက်လို့ နမိတ်ပုံလိုအိပ်မက်မျိုး။ နမိတ်ပြသလိုအိပ်မက်မျိုးဆိုတာတွေလည်း
ရှိနိုင်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးစစ်လိုက်တော့အိပ်မက်ဟာ အာရုံကစတယ်ပဲပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။
ကြိုက်လို့လိုက်တော့ လောဘစိတ်လေးပေါ်လာမယ်။ (မဟုတ်ပေဘူးလားဒကာတူးရဲ့)
ကျနော်ပြောတာမဟုတ်ရပါဘူး။ ဒါ တရားပါ။
Posted by KZကေ at 00:27 No comments:
D for Demonstrations
F for Fcuk (no spelling mistake)
G for G-talk
growing the globe is with modern and sophisticated
technology, poor diseases and interest politics and
I sawathree thin blue cloud swaying over my troubled idea
A Mad shop going inside kids
Would you like ………..
It in fact is …………….
Do you mind if I ……………………..
I’ve spent many days of my days as if I ………………….
Ringing tones are dancing inasmall lather bag attached onabelt
Likeamusic orapistol
One day I’ve tried breakingahard shell of one Sunday with expectation to seeaholiday
And I found of courseadamaged one
D for Days?
Posted by KZကေ at 17:22 No comments:
နောက်ပြီးရှေ့မှာပျိုးခဲ့တဲ့ ပါရီ ၂၀၀၃ ကလည်းရေးဖို့ရှိနေပါသေးတယ်
၂ ခုလုံးအတွက် အကြမ်းစိတ်ကူးထည်ကရှိပြီးသား
ပိုက်ဆံတွေပျက်ပြီ။ ရေဒီယိုို နာရီ စက်ပစ္စည်းများနည်းတူ့။
အတွေ့အကြုံပေါ်တွင် နောက်ထပ်သိစရာများ အသိပညာ များလှ
ညတို့နေ့တို့နာရီတို့ရေတွက်ပုံ ၁ ၂ ၃ ၄ ငါး ခြောက်
ပုရစ်ကလေးတွေအော်မည်နေ မိုးနေ့များ မော်တော်ကားပြေးပုံနှင့်ခိုင်းနှိုင်းရပေလိမ့်
ကာလတရားသည် တစစ်စစ် တစိမ့်စိမ့် တရိပ်ရိပ်
မျက်နှာပြင်တွင် ဓါးနဲ့ထွန်ရင်း နေ့စဉ် စိုက်ပျိုးသင်ယူ
ရေပန့်နှင့်ပြန်စုပ်ထုတ်၍မရသည်မှာခန္ဓာကိုယ်ထဲစီးဝင်နေသည့် တစစ်စစ် တစိမ့်စိမ့် တရိပ်ရိပ်
အမျိုးသမီးငယ် စားပစ်လိုက်တဲ့ အချိန်ကာလများပျိုရွယ် အရည်တရွှမ်းရွှမ်းပိုမိုစိမ်းလန်းခဲ့ပေမယ်
Posted by KZကေ at 23:36 No comments:
တလောက blog အသစ်လုပ်တဲ့သူငယ်ချင်းက link ပို့တော့
ဖွင့်ကြည့်တာ အံမယ် ခင်ဗျာက ကောင်တာတွေ စီဗုံးတွေနဲ့ကိုး
ဟေး ငါ့လည်းပြောဦးလေဆိုတော့ သူက ဟဲဟဲ ဟဲဟဲ နဲ့
လိုင်စင်ပုံလို ၁၅မိနစ်အမြန်ပေ့ါလေ ပို့ချပါတယ်
တခုပါပဲ ပို့စ် ၄၀ ကျော်မှကောင်တာမှာ ၁ ကစတော့
အင်းပေါ့လေ ကိုယ့်ဘာသာ တနေ့ ၁၀ ခါလောက်တော့ဖွင့်ရမှာပေါ့
တယ်လီဖုန်းမြည်မယ် ခနလေးပြောပြီး ညနေပြန်ခေါ်မယ် ဆိုသော်လည်း
၅ နာရီမှာလာမယ်တဲ့ မာရီယာ က ……
ကိုယ်စိတ်ထဲမိမိရရလုပ်ခွင့်မရ တွေးခွင့်မရ ပြောခွင့်မရ တာတွေ
အိပ်မက်ဟာ တ၀က်သိစိတ်နဲ့ ပြောခဲ့တဲ့နက်တဲ့တနေရာကဟာကိုပြန်တူးပြီးပို့တယ်။
ကိုယ်ဆုံးရှုံးခဲ့တာတွေ အောင်မြင်မှုအရိပ်အငွေ့တွေ အားနည်းချက်တွေ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ
ကျနော့်အတွက်တော့ ကောင်းတာတွေရှိပေမဲ့ ဆိုးရိပ်ပိုသာတဲ့ အတွေ့အကြုံ အာရုံ
တွေဟာ တ၀က်သိစိတ်ပိုက်နဲ့ညိပြီး ညဆီမှာ အိပ်မက်အဖြစ် လွတ်လမ်းရှာပါတယ်။
(တခါက ပြည်တော်ကြီးက စိတ်ပညာဆရာတဦးက Subconscious ကို
မသိစိတ်လို့ဆိုမဲ့အစား တ၀က်သိစိတ်လို့ ပြန်ဖို့အကြံပြုဖူးပါတယ်။ ကျနော်သဘောကျတာနဲ့
သို့ပေမယ်လို့ ထူးခြားတာတခုက အိပ်မက်ဟာ ကာလနဲ့ဒေသ ကို
ခင်ဗျားကတော့ထင်မှာပဲ ဒီလူတော့ လိုင်းပြောင်းပြီး အိပ်မက်အနက်ဖွင့်ကျမ်းတွေ
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ဆရာလို ပညာတတ်များလည်း အထင်မသေးရဲအောင်
နောက်ပို့စ်မှာ အိပ်မက်ထဲ time နဲ့ space ကိုကျနော်ကြိုးစားပြီးထဲ့ကြည့်ပါ့မယ်။
Posted by KZကေ at 22:522comments:
ဒီတိုင်းသာဆို အိပ်တာရယ် မှတ်ဥါဏ်ရယ် အိပ်မက်ရယ် မှာ
သဘောဥါဏ် (သဘောတရားကိုသာစွဲတဲ့ဥါဏ် semantic memory) ကသာပေါ်တာတဲ့။
ဥပမာ ကြောင်သည်ခြေလေးချောင်းသတ္တ၀ါဖြစ်သည် လို့ခင်ဗျားသိထားတာမျိုး။
ဟုတ်ပြီ။ သူတို့ဆိုလိုတာက ငါးရှဉ့်ခြောက်စပ် ချက်သလို အသားညှပ်ပေါင်မုန့်လုပ်သလို
တခုပြီးတခုအစီအစဉ်တကျမှတ်မိတဲ့ဥါဏ်မျိုး (စီစဉ်ဥါဏ် Procedural memory) နဲ့အိပ်မက်
တမျိုးပြောရမယ်။ ဒါကို အစီအစဉ်နဲ့လုပ်တာကိုမှတ်မိတဲ့ဥါဏ်နဲ့တော့သွားရောလို့မရဘူး။
အဲဒီလိုမျိုး ခင်ဗျားဇတ်ကြောင်းပြောဆန်ဆန် အိပ်မက်တွေ့လာခဲ့ရင်
အင်း ပညာရှင်တွေပေါ့ဗျာ သူတို့အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ကြလေရဲ့။
ခင်ဗျားရေးတဲ့တ၀က်မှတ်ဥါဏ်များနဲ့ဆိုင်တဲ့ comment ကိုဖတ်ပြီး
ဒီလိုပါ။ အိပ်တာရဲ့အဓိကကျတဲ့လုပ်ဆောင်မှုတခုက ခင်ဗျားမှာရှိတဲ့ ယာယီအချက်အလက်တွေကိုို
ဦးပေါ်ဦးကပြောတယ်လေ။ ကောင်းပါပေ့ ငါ့ရှင်ရယ် ကိုယ့်လူ ရှူးရှူးတော့မဖလားဝါးရဘူးတဲ့။
ဘယ်ဖြစ်ပါ့မလဲဗျ။ သူတို့နှစ်ခုက နှစ်ခုပေါင်းမှတချောင်းဖြစ်တဲ့ အီကြာကွေးလိုမလား။
ဘယ်ခွဲလို့ရပါ့မလဲ။ အိပ်တာလည်းဒီလိုပေါ့ အိပ်ရင်အိပ်မက်တော့မက်ကြရတာပဲ။
ကျနော်လည်းလူထူရင်ပြောလို့ရအောင် ဖရိုက်ဒ် တို့ လာကင်တို့ နဲနဲမှတ်ထားတာရှိပေမဲ့
သေချာတာတခုက ပညာရှင်တွေအဆိုအရ အိပ်မက်ဟာ အိပ်တဲ့အချိန်ရဲ့
REM (Rapid Eye Movement) အပိုင်းအခြားမှာဖြစ်တာ။ သိပ်နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်မအိပ်ပျော်တဲ့အချိန်လို့
အံမယ် ဟေ့လူ ခင်ဗျားအိပ်ငိုက်နေပြန်ပါပြီ။
Posted by KZကေ at 00:05 No comments:
၂၀၀၈ မေဟာ ပင်လယ်ကိုမြစ်အ၀မှာပေါ်တဲ့ကျွန်းပေါ်တင်ခဲ့တယ်
၂၀၀၉။ ချစ်သော အင်းယားမြေကိုလာခဲ့ပြန်ပါပေါ့
Posted by KZကေ at 23:242comments:
ချောက်ကနဲခလုတ် ရုတ်ကနဲအလင်း နဲ့လွင့်ချိန်
Posted by KZကေ at 01:172comments:
လင်မယားနဲ့အတူတူ။ သူတို့ကတောင်ရီနေသေးတယ်။ ဘာရီစရာပါသလဲ။
အရင်ကလို ငယ်ရုပ်နဲ့ လှလှပပလေးစက်ဘီးပေါ်မှာ။ ဦးထုပ်မှာဖဲပြားအပွင့်နဲ့အိမ်လာရင်ဆောင်းလေ့ဆောင်းထရှိတယ်။
Posted by KZကေ at 00:552comments:
ပြည်ထဲရေးနဲ့ ၀မ်းရေးတို့ထက်လို့ ဆိုတယ်မဟုတ်လား
Posted by KZကေ at 00:152comments:
ဖုန်းကိုပြောတာလေ။နိုကီရာ E66 မလား။
ထားပါတော့ အင်းဟုတ်တယ် E66 တဲ့။ ကျနော်ပြန်ပြောတဲ့အချိန်မှာသူကသူ့ဖုန်းကိုတောင်ထုတ်ပြနေပါပြီ။
ဒီသီချင်း MTV ကနေ့တိုင်းလောက်လာတယ်။ သိတယ်မလားတလောကတောင်ဆုတွေရသွားတာ။
ဟလို ကြားတယ် အင်းပြောပါ ရထားပေါ်မှာ။
အဲဒီအချိန်မှာပဲ ရထားကဘူတာတခုမှာရပ်တယ်။ ဘူတာကလမ်းဆုံဘူတာ။
Posted by KZကေ at 00:24 No comments:
Posted by KZကေ at 22:51 No comments:
အင်းဟိုးလပ်ဗ်လို့ထင်တာပဲ မဟုတ်လို့ ညလယ်မိုးဖြစ်ဖြစ် လူသွေးဖြစ်ဖြစ်
အသည်းတခြမ်းကိုလွမ်းဖို့သိမ်းထားပါရစေ ဆိုတဲ့ လှည်းတန်းမှာပေါ့
ပြီခဲ့တဲ့သုံးလလောက်က ကျနော်ပြည်တော်ကြီးပြန်တော့ လှည်းတန်းရောက်တယ်
စည်နေတာပဲ သို့ပေမဲ့စိတ်ထဲမှတော့ သူဟာဝိညာဉ်နှုတ်ခံထားရသလိုပဲ
ကျနော်လည်း ကျားကျားလျားလျားဆိုသော်ညား တခါတလေတော့
လူထူထူထဲ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့ လတ်လျားလတ်လျားလုပ်ချင်တာ
စေတနာရှင် မှာကျစိမ့်လေးတခွက် ဆေးလိပ်ပြတ်သွားပေမဲ့
ရတနာမြေပုံ ပြန်ရှာနေတယ် တွေ့ရင်တင်မှာ စိတ်ချ နဲနဲမြည်းချင်တယ်လား အင်းအင်း
ခုတော့ သူရေတွက်ရင်ခုန်ချင်ပါသည်ဆိုသော နှင်းပွင့်မြိုင်ပေါ်မှကြယ်ရိပ်များလည်း
Posted by KZကေ at 20:592comments:
ပထမဆုံးစပြီးပြင်းပြင်းထန်ထန်သတိရမိတာက မနှစ်က သီတင်းကျွတ်ရက်တွေမှာပေါ့
အဲဒီရက်ကဖေဖေ အလုပ်ပိတ်ရက်ပေမဲ့ အလုပ်များနေတာနဲ့သွားရတယ်
၀ပ်ရှော့ထဲမှာ နော်ဝေက offshore platform တခုအတွက်လက်ခံထားတဲ့
utility skids တွေကအပ်ရမဲ့ရက်သိပ်နီးနေတာကိုး
သံကြမ်းခင်းတွေ ဖရိန်တွေ လက်ရမ်းတွေ ပိုက်တွေ tank တွေ
ဂဟေဆရာတွေက မီးတ၀င်းဝင်းနဲ့ သံသားကိုပျော့ပြောင်းအောင်စီးနင်းကြတာတွေ့တော့မှ
ပန်းထွက်လာတဲ့မီးတွေဟာ သားတို့ဆော့တဲ့ မီးပန်းတွေလိုပေါ့
ဖေဖေက အလုပ်ထဲမှာ မေမေကမီးဖိုထဲမှာ သားသားနဲ့ သမီးတို့ကခြံရှေ့ကလမ်းပေါ်မှာ
ဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွားက ဘုရားခန်းထဲမှာ ထွန်းထားတဲ့မီးတွေ ညှိထားတဲ့မီးတွေ
အော်လူသားဟာ မီးကိုလိုသလိုစီမံရင်း လောင်းကျွမ်းနေတာပါလားလို့ ဖေဖေ တွေးဖို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်
လောင်ကျွမ်းမှုတိုင်းမှာ အလင်းရောင်နဲ့ ပူလောင်မှုရှိတယ် သားနဲ့သမီး
ပြီးတော့ မီးကိုအများအတွက်ထွန်းညှိသူတွေ ဖြစ်လာနိုင်ပါစေလို့
Posted by KZကေ at 23:402comments:
ပါရီမှာဗင်ဂိုးတို့ မိုးနေးတို့ တသိုက်ရဲ့ impression လက်ရာတွေပဲစုထားတဲ့
ပန်းချီသိပ်နားမလည်ပေမဲ့ ဒီအထဲမှာ မိုးနေးရဲ့အရောင်ရွေးပုံနဲ့တင်ပြပုံတွေကို
Posted by KZကေ at 23:252comments:
ပါရာတက်စ် (၂၀၀၈ ခေတ်ပြိုင်ဝေါဟာရများ)
Game Boy ပဲရှိပြီး Game Girl မရှိပါလားဆိုလာလျှင်
ငြင်းစရာများရှိနိုင်သော်လည်း Walkman ပဲရှိပြီး Walkwoman မရှိခဲ့
ကျနော်ပြောချင်တာက စကားလုံးတွေမှာ အားရှိသည် အုပ်စိုးမှုရှိသည် ဖိစီးမှုရှိသည်
အလင်း နဲ့ အမှောင်။ နေ့ နှင့် ည။ အမှား နဲ့ အမှန်။ အချစ် နှင့် အမုန်း စသည်ဖြင့်
နောက်တော့ ဟေဂယ် နောက်တော့ ဒိုင်ယာလက်တစ် နောက်တော့ ကားလ်မတ်စ်
လူတန်းစားတိုက်ပွဲ အလုပ်သမား အရင်းရှင်
ယဉ်ကျေးလာသောကမ္ဘာသည် ပိုင်ဆိုင်ချင်သည် ကျော်ကြားချင်သည် ပေါ့ပါးချင်သည်ပေါ့
သည်တော့ ရင်ဆိုင်ရသည် တိုက်ခိုက်ရသည် ကိုယ်မှန်ကြောင်းထောင်းထောင်းဗိုလ်ခြေ ကြေညက်ရသည်
ထားတော့ မူရင်းတည်ထားတာက စကားလုံးတွေ
လူတွေ သိုးနေအောင်အိပ်တော့မှောင်မှ ဒါပေသည့်အမှောင်သည်အဆိုး
အဖြူကအကောင်း အမဲကအဆိုး ဒီလိုခွဲခြားနားလည်လာခဲ့ကြသည်
စကားလုံးတွေစီရေးပြီး တခုကတခြားတခုကို အနိုင်ကျင့်လွှမ်းမိုးမှုမရှိရင်ကောင်းလေစွ
Paratext သည် ထိုအတွေးအခေါ်ပေါ်အခြေခံခဲ့သည်လား
ပါရာတက်စ်။ ၂၀၀၈ ခေတ်ပြိူင်ဝေါဟာရများ
သွေးလွန်တုတ်ကွေး ဓတ်ဆားရည် HIV နာရေးကူညီမှုအသင်း
အိမ်ကွင်း အဝေးကွင်း တန်းဆင်းဇုံ
မန်ယူ အာကြီး မန်စီးတီး သက်ဆင်
ပရီမီယာလိဂ် စီးရီးအေ ချန်ပီယံလိဂ်
NO ACID EXAMPLE လေးဖြူ CD DVD ခိုးကူးခွေ
နိုတြီ နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား မိုဖာ
NGO INGO UN
မြန်မာစာ တရုတ်စာ အင်္ဂလိပ်စာ ဂျပန်စာ
ကိုရီးယားကား မြဝတီ မြန်မာ့အသံ TV5
စီဘီယာ စားသောက်ဆိုင် ကေတီဗွီ ကာရာအိုကေ
First eleven Weekly eleven မော်ဒန် Voice ဈေးကွက်
အင်တာနက် ချက်တင် ဂျီမေး အီးမေး ပီဖင်ဂို
လူမင်း နေတိုး အိန္ဒြာကျော်ဇင် သင်ဇာဝင့်ကျော်
လီယိုတာ ဒါရီဒါ ဖူးကို ရော်တီ ဘိုးဒရီးယား
ပညာရေးဆွေးနွေးပွဲ ကျောင်းဝင်ခွင့် စင်္ကာပူပေါ်လီ
S pass ပြည်ပအလုပ်အကိုင်ရှာဖွေရေးအေဂျင်စီ ဝန်ဆောင်ခ Work permit
အခြေခံဥပဒေ ၄၇ ၇၄ ၂၀၀၈
နာဂစ် ဒေးဒရဲ ဖျာပုံ ဘိုကလေး လပွတ္တာ
ဟေဂယ် မာက့် ဒိုင်ယာလက်တစ် လစ်ဘရယ် နီယိုကွန်
Color Revolution ရုရှား ဂျော်ဂျီယာ ပင်လယ်နက် စစ်အေးသစ်
စိုက်ပျိုးချိန် မျိုးစပါး ထွန်ယက်ကရိယာ မြေဩဇာ
နိုကီရာ ဆမ်ဆောင်း အိုင်ဖုန်း လူကြီးမင်း ဆက်သွယ်မှုဧရိယာ
911 119 8808
ဂလိုဘယ်လိုက်ဇေးရှင်း သမိုင်းနိဂုံး အာရှအံ့မခန်း နန်းပိုလာရတီ
အိုဘားမား ကလင်တန် မက်ကိန်း ဘင်လာဒင်
ဂက်စ် ရေနံ အနုမြူ စွမ်းအင်လုံခြုံရေး
အမျိုးသားရင်ကြားစေ့ရေး တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲ လမ်းပြမြေပုံ ရွေးကောက်ပွဲ
ဒေါ်လာဈေးကျ ရွှေဈေးတက် အိမ်ခြံမြေဈေးငြိမ်
R+ ဇုံကား စူပါစလွန်း86/87 CE.96
ပွဲပေါင်း ၁ပုလင်း ၁လုံးပြားခြောက်ဆယ် အောက်သင်း
Account transfer အက်ဖ်အီးစီ အစိမ်း Exchange rate
တရုတ် ရုရှား အမေရိကန် အာစီယံ အီးယူ
Auto CAD စာရင်းကိုင် ACCI TOFEL
အာဖဂန် အီရတ် အီရန် မြောက်ကိုရီးယား
တရုတ်အင်ဂျင် ဂျပန်မိတ် ယိုးဒယားလုပ် ပြည်တွင်းဖြစ်
စာရေးဆရာသေဆုံးခြင်း စာဖတ်သူသီအိုရီ LP မော်ဒန် ပို့စ်မော်ဒန်
ဓတ်ဆီ ဒီဇယ် CNG
Posted by KZကေ at 00:29 No comments:
တစ်သမတ်အလျှင်တစ်ခုလို… ဖြောင့်ဖြောင့် သွားနေရာမှ
ဖြတ်ပိုင်းတစ်ခု ဖြတ်၍ပြီးလုပြီးခင်မှာပင်….. လှိုက်ခနဲဖို
သူ.ခမျာ…ပြန်မှ တက်လာနိုင်ပါလိမ့်မလား…. ။
၁၂ ကျပ်ပြုတ်ကျသွားပြီ ။
ကျွန်တော်ငွေလွှဲတာS$ 1= 650 Kyats တဲ့ ။ Paul Krugman ရဲ. ဥာဏ်ပညာကို သံသယ မဝင်သော်ငြား ....
တစ်ခါတစ်ခါတော့လည်း မိမိ၏ ဘဝကို Bailout လုပ်ပေးမယ့် ဘုရားသခင် ရှိလေမည်လား ....
ငါ့လိုမမှားကြလေနှင့် ဟုဆိုလိုခြင်းတော့ မဟုတ်တန်ရာ ။
မိဘတို.၏ မျှော်လင့်ချက်များ ကြီးမားနေခြင်းမှာ..သားသမီးအတွက်တော့ ဝန်ပိနေလေမည်လားပင် ။
နယူတန်ဆိုရင်တော့ ဒီမေးခွန်းကို ဖြေနိုင်ကောင်းရဲ.ထင် ။
ငွေသွားပို့တဲ့အကြောင်း (တခု) ဖွဲ့ရာက ငွေဈေးကျတာကို (နောက်တခု) လက်ရှိ Bail out နဲ့ချိတ်သည်
နောက်ခံကားသည် P Plaza ဖြစ်သဖြင့် target audience ကိုကျဉ်းပြီးဖြစ်သည်
ဒါကို ထပ် Bail out သော် ပိုကျဉ်းသွားသည်။ P Krugman သုံးတော့တော်၂ကိုတော်၂ဖြစ်သွားပြီ။
ပြည်တော်ကြီးမှာဆို ဒါမျိုးတွေ ဆော်ပလော်တီးဖူးပေါင်းများပြီ။ အင်္ဂလိပ်နာမည်တွေဘာညာ။
ပြောရရင် Reading of meaning သမားများအတွက်ေ၀၀ါးမှုဖြစ်စေပြီ။
၂။ နောက်စာကြောင်းတွေမှာပြောင်းသွားပြီ။ အတွေးကလက်ရှိအဖြစ်အပြင်အရင်စဉ်းစားတဲ့အခံတွေရောလာသည်။
ဖွဲ့နွဲ့ရင်း အဘိဓမ္မာ ဆန်ချင်လာသည်။
ကိုးကားသည့်ကဗျာမှာ အောင်ချိမ့်၏ အချစ်သီချင်းဖြစ်သည်။
တပုဒ်လုံးအကြောင်းပြောရလျှင် မူရင်းကဗျာက စာရေးသူ(တီတီအေ) သံသယ ဖြစ်သည့်နောင်တသံ (မှားတာနမူနာမယူဖို့) ကိုတင်း၂ရင်း၂
နှင့်အဆုံးပိုဒ်သွင်းသည် ဟုယူမိသည် (ယခုဝေဖန်သူ ကထင်တာ)
သို့သော် နောက်ဆုံးပိုဒ်ပဲကိုးကားသော် ရေးသူမှာ ကြိုက်ရာ ညွှန်းခွင့်ရသွားသည်
ဒါကပြသနာမဟုတ်။ ပထမပြောခဲ့တာနှင့်ပြန်ဟပ်သော် ပရိတ်သတ်အကျဉ်းနှင့်ပင်အနက်ယူပုံလွဲနိုင်သည်။
သို့သော် P Plaza, P Krugman, Bail out, အောင်ချိမ့်, ဘားရက်, နောက်မျိုးဆက်, အသိတရားနှင့်ပညတ်ချက်
ပန်းသီးကို အင်ဒိုနီးရှားပါတိတ်လို့ထင်မည့်ပရိတ်သတ် က နယူတန်ကို နောက်ပေါ်တဲ့အဆင်ထင်မလားပဲ။
(ခင်ချောဆွိကတော့ မင်းကတော့အိုင်စတိုင်းကျနေတာပဲပြောသည့်ကိုထူးဆန်းကို ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီးတွေနှင့်မနှိုင်းနဲ့လို့
ဒီတော့ သေချာတာဒီအရေးအသားမှာ Subjectivity များသည်။ အဓိပ္ပါယ်အကြောင်းပြောသော်
Reading for form ရှိတာပဲဆိုသော်။ နဲနဲပိုကောင်းဖို့လိုမည်လား။ မပြောတတ်ပါ။
ရေးသူ၏အတွေးမှာ ဗဟိုကဖြာသွားဖို့ကြိုးစားသော်လည်း ထင်သလောက်ပြန့်သွားပါ့မလား မဆိုတတ်ပါ။
ချစ်ခင်စွာ ဆန်ရင်းနဲနဲနာ သွားသလား မထင်တတ်ပါ။
မှတ်ချက်။ သူမျာရေးတော့ပြောလို့ကောင်တာပေါ့။ ဘာအလုပ်မှမရှိဘူးတော့မထင်နဲ့ပေါ့ကွာ။ အား ခုလိုရေးလည်းရတာပဲ။ ပေါ့ပါးလိုက်တာ။ မင်းပြောတဲ့ အသိညံ ဆိုတာပေါ့။ ခက်တယ်။ ဟုတ်တယ်။
Posted by KZကေ at 21:42 No comments:
အင်း ရေနွေးလည်းမကြိုချင် ဖျော်ရည်လည်းကုန် CNN ကလည်း SWINE FLU
ရုံးရောက်တော့ ဘာဆိုင်မှမဖွင့် ယိုးဒယားမကြီးဖျော်ပေးသော အနက်ရောင်ကော်ဖီမှာ
သို့သော် မြေတူးသူတွေ ဂဟေတို့သူတွေ ပိုက်ဆက်သူတွေကြား
အလုပ်သမားတွေ ကြီးကြပ်သူတွေ အင်ဂျင်နီယာတွေ တ၀က်လောက်မလာကြ
ကောင်းတာပ ငါ့လူတို့ရယ် ခုလိုသတ္တိမျိုးမွေးစမ်းပ
ခပ်ပြင်းပြင်း အရက်တလုံးနဲ့ ဒီနေ့ညနေရုန်းစမ်း
ကိုယ်ထဲစိမ့်ဝင်နေတဲ့ ကြီးရင့်မှုနဲ့နွမ်းနယ်မှုကို အန်ထုတ်လှုပ်ရမ်းစမ်းပ
ဟောကြည့်စမ်း ကိုယ်အိတ်ကိုပိတ်ပြီးဒီနေ့ပြန်တော့ အပြင်မှာ
Posted by KZကေ at 21:122comments:
အသံတွေကမာတယ် ပြတ်တယ် ရဲရင့်တယ်
ဒါ ကြည်အောင် ပဲ
သစ္စာရှာဖို့ငါမြင်းစီးမယ် ကြတော့ ဘယ်နှစ်ခေါက်မှန်းမသိဘူး
ခုတော့ အနတ္တကိုထင်သလိုဘာသာပြန်သူ ခုတော့ မောလွယ်ဟသူ
ခုတော့ မြန်မာပြည်ဖွားသည်ရပ်သားဟု ၀င့်ကြွားခြင်းငှာမတတ်သာသူ
Posted by KZကေ at 22:56 No comments:
ဆာဒါ ဘယ်အပိုင်း? တကိုယ်လုံးအိန္ဒိယမှာပဲမွေးတာပေါ့
ဘော်ဒါ မေ့သွားပြီဟ။ တီနဲ့တော့စတာပဲ
ဆာဒါ တီး။ တယ်ဟုတ်ပါလား။ ငါသိသမျှတခြားကားတွေတော့ petro နဲ့နှိုးရတာ
ပြတိုက်စောင့် ခင်ဗျားကြောင့်ကျိုးသွားတာနှစ် ၁၅၀ လောက်ကရုပ်တုဗျ
ဆာဒါ တော်ပါသေးရဲ့။ အသစ်ကြီးထင်လို့
ဆာဒါ တံဆိပ်ကပ်ထားတာတော့ made in japan ပဲ။ လာတော့ all India radio လို့ပြောနေတယ်
ဆာဒါ ဒတ် ဒူ ဒူ ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ ဒါ………..
အင်တာဗျူးမေးသူ ရပြီ ရပြီ ရပ်ပါတော့
ဆာဒါ ဒါ ဒါ ဒူ ဒူ ဒတ် ဒတ်
Posted by KZကေ at 00:34 No comments:
ကျနော့်မှာဘာရယ်မဟုတ်ဆရာမြဘာသာပြန်ခဲ့တဲ့မာယာကော့ဖ်စကီရဲ့ ဘရွတ်ကလင်တံတားကို ပြေးသတိရတယ်
အလုပ်များလွန်း မအားလပ်လွန်းတဲ့ကြားကပဲ အာရုံနိုးလို့ Assembling Alternatives ဆိုတဲ့စာအုပ်တအုပ်ကိုနဲနဲပြန်ဖတ်ကြည့်ပါတယ်
Interview with an empire ဆိုတဲ့အခန်းပါ
အကြောင်းသင့်လာလို့ LP (Language Poetry) အကြောင်းနဲနဲပြောပါရစေ
လောလောဆယ်ကျနော်တို့ဆီမှာဒါဟာကဗျာမှာအသစ်ဖြစ်ထွန်းမှုတခုပါ။ ငြင်းခုံစရာတခုပါ (ကျနော်LP မကြိုက်ပါ)
သို့သော်နိုင်ငံတကာမှာ LP ဟာကျနော်တို့နားလည်ထားတာထက်များပိုပြီးထုကြီးနေသလားလို့သံသယရှိမိပါတယ်
ဘာသာစကားကိုကဗျာဆရာတဦးကသံသယရှိတာဟာ ပန်းပုဆရာက သစ်တုံးကို ဒါမှမဟုတ် ကျောက်တုံးကို စွန့်ပစ်ဖို့ကြိုးစားတာထက်ပိုခက်ခဲစေပါတယ်
အာဖရိကန်နွယ်ဖွား ကဗျာဆရာမက ဒါကို ကျွန်ကုန်ကူးတဲ့ခေတ် ကနေစလို့သူတို့ဘာသာစကားပျက်စီးခဲ့ရာကစလို့ အခြေခံခဲ့တာ မှင်သက်ခဲ့ရပါတယ်
ကဗျာဆရာ ဇေယျာလင်းရဲ့ ကဗျာရေးသူကိုထုတ်လုပ်ခြင်း စာအုပ်ကအချို့စာကြောင်းတွေကိုကျနော့်သဘောနဲ့ပြန်ဖွဲ့စည်းကြည့်မိပါတယ် (ဟိုနေရာကတကြောင်းယူ ဒီတပုဒ်ကတကြောင်းယူပေါ့ LP ကဒါမျိုးတွေလုပ်တတ်ပါတယ်ကျနော်LPမကြိူက်ပါ)
ခေါင်းစဉ်ကစလို့တခုမှကျနော့်ကိုယ်ပိုင်မပါပါ။ အချစ်ကိုကြာရှည်ခံခြင်း ကဗျာနဲ့လည်းတွဲဖက်ခံစားနိုင်မလားပဲ။
သို့သော် အထက်ကဗျာဆရာမကတော့ စကားလုံးတွေကိုဘယ်သူကပိုင်သလဲတဲ့။ အသစ်ရေးချင်ရင်(အစစ်အမှန်ကိုရှာချင်ရင်) ဘာသာစကားဟာကန့်လန့်ခံနေပုံပဲ (သူ့အတွက်တော့)
Posted by KZကေ at 00:41 No comments: